उपनिर्वाचनमा उल्टियो जनमत « Mechipost.com
उपनिर्वाचनमा उल्टियो जनमत
प्रकाशित मिति: १९ मंसिर २०७६, बिहीबार १८:१६
२०७४ असारमा सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा पाँचथरको हिलिहाङ गाँउपालिका वडा नं. ७ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले)का तीर्थराज तिम्सिना प्रतिद्वन्द्वीभन्दा २१९ मत बढी ल्याई वडाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो । शिक्षण पेशामा अवकास पाएपछि राजनीतिमा आउनुभएका तिम्सिनाले सामाजिक क्षेत्रमै सक्रिय काँग्रेसका डिल्ली सुवेदीलाई पराजित गर्नुभएको थियो । तर तिम्सिनाको सोही सालको निधन भयो ।
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा यहाँ तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र संघीय समाजवादी फोरमले तालमेल गरेका थिए । समाजवादीका धिरेन योक्पाङदेनले वडाध्यक्षमा ४५ मत पाउनुभएको थियो । तर माओवादी केन्द्रमा वडा सदस्यका दुई जना उम्मेद्वारले ७० भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । दुई दलको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को मत बढेको धेरैको अनुमान थियो । उपनिर्वाचनमा सबैको अनुमान फेल भयो । यहाँ नेपाली काँग्रेसका तिलविक्रम इधिङ्गो ३० मतको अन्तरले विजयी हुनुभयो ।
यो वडा खानेपानीको अभावले ग्रस्त छ । सुख्खाका कारण यहाँ उत्पादन घट्दो छ । बसाईँसराईँ बढिरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अवस्था पनि कमजोर छ । यहि वडामा सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकार कमजोर देखियो । नागरिकलाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने कार्यक्रम गाँउपालिकाले अघि बढाउन सकेन् । हिलिहाङ गाँउ कार्यपालिकामा नेकपाको मात्रै उपस्थिति छ । उसले प्रशस्तै विकास योजना अघि बढाउन तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त र ब्यवस्थित गर्न नसकेको गुनासो मतदाताको थियो । यसैकारण मतदाताको रुझान काँग्रेसतर्फ बढ्यो । आम नागरिकमा स्थानीय तहप्रति धेरै शङ्का उपशङ्का राख्ने मौका समेत गाँउपालिकाले नै दियो ।
यो वडा पाँचथरमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र दुवैको उद्गमस्थल हो । यहाँ पर्ने तत्कालीन सुभाङ गाँउ विकास समितिको एकचेपा गाँउ र भारपा गाविस नेकपाका लागि धेरै महत्वपूर्ण स्थान थिए । तर नेकपाले आफ्नो वर्चस्व स्थापित गरिराख्न सकेन् ।
जिल्लाको सदरमुकाम रहेको फिदिम नगरपालिका वडा नं. १ जिल्लाको सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको वडा हो । यहाँ विगतमा काँग्रेसका हर्कबहादुर मोक्तान तत्कालीन एमालेका गजाधर भट्टराईलाई ५ मतले पछि पार्दै वडाध्यक्ष चुनिनुभएको थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सागर नेम्वाङले १३५ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । मोक्तानको गत साउन ६ गते निधन भएपछि यहाँ उपनिर्वाचन भयो । नेकपाका गजाधर भट्टराईले प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका सुवराज थापालाई ४७४ को भारी मतान्तरले पराजित गर्नुभयो । यहाँ नेकपाको अपेक्षाभन्दा बढी मत खस्यो ।
फिदिम नगर कार्यपालिकामा काँग्रेससँग दुई तिहाइभन्दा बढी मत छ । तर काँग्रेसले यो वडा जित्नसक्ने कुनै आधार बनेन् । सुरुआतदेखि नै यहाँ जनप्रतिनिधिहरुको आफ्नै दलबाट विरोध र आलोचना सुरु भयो । नगरपालिकाभित्र वेथिति र अनियमितताका घट्नाहरु क्रमशः सार्वजनिक हुँदै गए ।
नयाँ शहरको रुपमा विकास भइरहेको फिदिममा प्रदेश र संघीय सरकारले अर्बौँका योजना भित्र्याए । यसमा नेकपाले जस लिने मौका पायो । नगरपालिकाले अपेक्षाकृत काम गर्नु त कहाँ हो कहाँ बजार क्षेत्रमा न्यूनतम पूर्वाधार पुर्याउन समेत चासो दिएन् । अनि यहाँका मतदाताको मन फेरियो । नेकपाले जिल्लाको मूख्य स्थानमा भारी मतान्तर हाँसिल गर्नु सामान्य विषय थिएन् । मुख्य स्थानमा विजय पाएपछि नेकपाले भन्यो – फिदिम नगर नेकपाको हातमा जानबाट अब रोकिन्न ।
फाल्गुनन्द गाँउपालिकाको अवस्था उस्तै रह्यो । यहाँका सात वटा वडामध्ये पाँच वटामा काँग्रेस विजयी भएको छ । प्रतिद्वन्द्वी तत्कालीन नेकपा (एमाले)का वीरबहादुर कुरुम्बाङलाई आठ सयभन्दा बढी मतले पराजित गर्दै गाँउपालिका अध्यक्षमा वौद्धिक ब्यक्तित्व अमरकुमार नेम्वाङ विजयी हुनुभएको थियो । उहाँको निधनपछि यहाँ उपनिर्वाचन भयो । विगतमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारको मत जोड्दा समेत दिवङ्गत नेम्वाङले प्राप्त गर्नुभएको मत बढी थियो ।
तर उपनिर्वाचनमा परिणाम उल्टियो । नेकपाका वीरबहादुर कुरुम्बाङले ८०६ मत अन्तरले गाँउपालिका अध्यक्षमा विजय हाँसिल गर्नुभयो । उहाँले नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति पाँचथरका सचिव वृजहाङ आङदेम्बेलाई पराजित गर्नुभयो । यहाँ नेकपाले विजय मात्रै पाएन, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उद्गम थलोमा बामपन्थी झण्डा फहरायो । यहि फाल्गुनन्द गाँउपालिकाको वडा नं. ३ पौवासारताप प्रजातान्त्रिक आन्दोलन योद्धा भूविक्रम नेम्वाङ जन्मभूमि हो । काँग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्रीत्रय देउमान आङदेम्बे, प्रेमराज आङदेम्बे र नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङ तथा नेताहरु कृष्णविक्रम नेम्वाङ, गणेशप्रसाद रिजालको जन्मभूमि पनि यहि फाल्गुनन्द गाँउपालिका हो ।
तर फाल्गुनन्द गाँउपालिका सहित पाँचथर क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङबो प्रदेश सरकारको मन्त्री चुनिएपछि यहाँको अवस्था फेरियो । मन्त्री आङबोको पहलमा यहाँ तीन अर्ब हाराहारीका विकास आयोजना प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित छन् । संघीय सरकारले पनि विशेष महत्वको राँके रबी भेडेटार सडक निर्माण थाल्यो । पूर्वाधार निर्माण, सेवा प्रवाह तथा खानेपानी, विद्युत, सडक, सिंचाई जस्ता सेवा गाँउपालिकाभित्र पुर्याउन नेकपा उम्मेद्वारको अथक मेहनत रह्यो । नेकपाको यो पहलले जनमत नेकपातर्फ नै आकर्षित भयो ।
तीन पदका लागि भएको उपनिर्वाचनमा पाँचथरमा जनमत उल्टियो, त्यो पनि ठूलो मतान्तरले । उपनिर्वाचनको मतपरिणामले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहको अवस्था, आम नागरिकमा स्थानीय सरकारको काम कारबाही र गतिविधिप्रति रहेको असन्तुष्टि ब्यक्त गर्यो । जनमतले जनप्रतिनिधिहरुलाई सच्चिन र दलहरुलाई जनप्रतिनिधिलाई जनमैत्री एवं सेवामैत्री बनाउन दबाव दिएको छ ।